अमेरिकामा एकैदिनमा २ लाख संक्रमित! - Himal Dainik
काठमाडौँ ७ मंसिर २०७७, आईतवार ०८:३४
अमेरिकामा एकै दिनमा झन्डै दुई लाख जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । शनिबार अमेरिकामा कुल एक लाख ९५ हजारमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। यसअघि शुक्रबार एक लाख ९८ हजार पाँच सय कोरोनाबाट बिरामी भएका थिए। जसमध्ये ८२ हजार भन्दा बढीलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको त्यहाँका संचार माध्यमले जानेको छ।
पछिल्लो अपडेट अनुसार अमेरिकामा अहिलेसम्म एक करोड २२ लाखमा कोरोना संक्रमण देखा परिसकेको छ भने कुल २ लाख ६० हजारको मृत्यु भई सकेको छ। पछिल्लो एक हप्तामा अमेरिकामा १० लाख संक्रमित थपिएको छ।
न्यु वोर्क टाइम्सका अनुसार, पछिल्लो दुई हप्तामा प्रति दिन एक लाख भन्दा बढी संक्रमित फेला परेको छ । युस सेण्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सनलेका अनुसार नयाँ संक्रमितहरुमा अहिले कुनै कोरोनाको लक्षण देखा नपरेको छैन । सेण्टर्सले क्रिसमस र जाडोको समयमा अवस्था झन् नाजुक हुने आशंका व्यक्त गरेको गरेको छ ।
अघिल्लोझुलपोखरीको अंशवण्डा गर्न कीर्तिपुर र चन्द्रागिरीका जनप्रतिनिधि चन्द्रागिरी हिल्समा!
पछिल्लोदुर्घटनामा श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान् र छोरी गम्भीर घाइते